အလုပ်သမားအဖွဲ့ချူပ်၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချူပ်၊ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြေခံအလုပ်ရှင် အဖွဲ့ အစည်းများ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၁၃-၉-၂၀၁၉ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၉-၈-၂၀၁၉ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၃၁-၅-၂၀၁၉ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂၃-၄-၂၀၁၉ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂၈-၂-၂၀၁၉ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂၃-၁-၂၀၁၉ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂-၁၀-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂၄-၈-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံ..
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၁၃-၇-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်.. (269)
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၁၂-၄-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံ.. (252)
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂-၂-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံသိရှိရန်... (336)
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၉-၁-၂၀၁၈ အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (270)
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (288)
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစာရင်းချုပ် ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ အျပည့္အစံုကိုသိႏိုင္ပါရန္.. . . . . . (312)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ (၂၀-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့ အထိ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီးသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းချုပ် အပြည့်အစုံ.. (135)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ (၁၂-၃-၂၀၁၉) ရက်နေ့ အထိ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီးသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းချုပ် အပြည့်အစုံ.. (137)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ (၂၀-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့ အထိ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီးသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းချုပ် အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (623)
၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-
(၂-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှ (၁၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၂၄) ဖွဲ့
အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း (-) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၈ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (၁) ဖွဲ့
(၂-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှ (၉-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၁၂) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၇ ) ဖွဲ့
(၂-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှ (၃၁-၅-၂၀၁၉)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၀၀) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁) ဖွဲ့
(၂-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှ (၂၉-၃-၂၀၁၉)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၇၂) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂ ) ဖွဲ့
(၂-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှ (၉-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၄၉) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (-) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (-) ဖွဲ့
၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-
(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၂၁-၁၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၂၅) ဖွဲ့
အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း (၁) ဖွဲ့
(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၂-၁၀-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၁၀) ဖွဲ့
(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၃၀-၇-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၈၂) ဖွဲ့
(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၂၉-၆-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၆၉) ဖွဲ့
(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၁၂-၄-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၉၇) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၄ ) ဖွဲ့
(၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မှ (၂-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၄) ဖွဲ့
အပြည့်အစုံ ... (295)
၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-
(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၂၂.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၄၅) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၂ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၃ ) ဖွဲ့
အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (263)
(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၆.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၁၀) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၁ ) ဖွဲ့
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (274)
(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၁၅.၉.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၆၃) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၈ ) ဖွဲ့
အျပည့္အစံုကိုသိႏိုင္ပါရန္.. . . . . . (267)
(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၁၉.၅.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၂၀) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၃ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂ ) ဖွဲ့
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (439)
(၂.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၁၀.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၄၀) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁ ) ဖွဲ့
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (339)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-
(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၂၆.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၄၃၁) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၆) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅ ) ဖွဲ့
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (404)
(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၁၃.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၄၂၃) ဖွဲ့
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (381)
(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၁၄.၁၀.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၆၂) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၅) ဖွဲ့
အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ................... (435)
(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၂၉.၈.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၈၅) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၄) ဖွဲ့
(၁၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ မှ (၆.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၀၆) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၇) ဖွဲ့
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ မေလ ၆ ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၁၃၂) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၄ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃၂၄) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၄၃ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၁၀ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၃ ) ဖွဲ့
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ အထိ
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၅၅) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၃၅ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၈ ) ဖွဲ့
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ (၂၃-၇-၂၀၁၅)အထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၂၇) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၂၇ ) ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၆ ) ဖွဲ့
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ မေလအထိ
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၉၄ ) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၆ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၁ ) ဖွဲ့
အဖြဲ႔အစည္း စာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (792)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-
၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅၉၆ ) ဖွဲ့
အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ( ရ ) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၃၀ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ( ၂ ) ဖွဲ့
အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . (750)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-
၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ( ၅၁၉ ) ဖွဲ့
အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ( ၄ ) ဖွဲ့
အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ( ၁ ) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၂၁) ဖွဲ့
မြို့နယ်အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ( ၁ ) ဖွဲ့
၂၀-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ အထိ အဖြဲ႕အစည္းစာရင္း အျပည့္အစုံ . . . . . . . . . . (886)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခွင့် ခွင့်ပြုပေးထားသော အဖွဲ့အစည်း စာရင်းအား အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-
၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) (1726)
(က) ၉၉၉ သံနန်းဆွဲ စက်ရုံ အခြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံ(၁၂/၂၀၁၂)
(ခ ) Sweety Home မွေ့ယာစက်ရုံ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံ(၁၆၉/၂၀၁၂)
(ဂ ) အမှတ်(၂) စီးကရက်စက်ရုံ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံ(၁၈၈/၂၀၁၂)
(ဃ) ပေါင်းလောင်း(၃) ကုန်တင်ကုန်ချအခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အခြေခံ(၄၉/၂၀၁၃)
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ခန့်အပ်သော မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံးများ၏ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာများ